အဆိုပါ foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ? | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
အဆိုပါ foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ?
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မသိသေးသောအရာများစွာကိုရှင်းပြသည့်မိုးလေ ၀ သဇယားတွင်မရေမတွက်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာအနောက်လေရှိသည့်အခါပုံမှန်ထက် ပို၍ ပူသည်မှာအခြေအနေများဖြစ်သည်။
ဤသည် foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပူပြင်းပြီးစိုထိုင်းသောလေထုကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တောင်ပေါ်သို့တက်စေသည့်အခါဖြစ်ပျက်သောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေက၎င်းမှဆင်းလာသောအခါစိုထိုင်းဆနည်းပြီးအပူချိန်ပိုများသည်။ သငျသညျ foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ အရာအားလုံးကိုသိလိုပါသလား?
1 ဘယ်လို foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပျက်သလဲ
2 ကမ္ဘာတဝှမ်း foehn အကျိုးသက်ရောက်မှု
2.1 Alp ၏မြောက်ဘက် Foehn အကျိုးသက်ရောက်မှု
2.2 မြောက်အမေရိက foehn အကျိုးသက်ရောက်မှု
2.3 အင်ဒီးအတွက် Foehn အကျိုးသက်ရောက်မှု
2.4 စပိန်အတွက် Foehn အကျိုးသက်ရောက်မှု
3 အဆိုပါ foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စိုက်ပျိုးရေး
ဘယ်လို foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပျက်သလဲ
စပိန်နိုင်ငံတွင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာမှအနောက်လေသည်တိုက်ခတ်သောအခါလေထုသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တောင်ကိုဖြတ်ကျော်ရသည်။ လေကတောင်ကိုတွေ့တဲ့အခါ၊ ၎င်းအတားအဆီးကိုကျော်သွားနိုင်သည်။ လေထုသည်အမြင့်တွင်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်အပူချိန်ကိုလျော့ကျစေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်အမြင့်တိုးလာသည်နှင့်အမျှအပူချိန်ကျဆင်းလာသည်။ တောင်ထိပ်သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သူသည်ဆင်းလာသည်။ လေထုသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တောင်သို့စီးဆင်းသွားသောအခါ၎င်းသည်စိုထိုင်းဆကိုဆုံးရှုံးပြီး၎င်း၏အပူချိန်ကိုတိုးပွားစေသည်။ ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်သို့ရောက်သောအခါ \_ t ၎င်း၏အပူချိန်သည်တောင်ကိုတက်စပြုသည့်အပူချိန်ထက်မြင့်မားသည်။
၎င်းကို foehn effect ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်တောင်စွန်းအားလုံးနီးပါး၏ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်သော်လည်းအနောက်လေသည်တိုက်ခတ်သောအခါစပိန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားသည်။ ပူသောလေထု၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်သည်တောင်ပေါ်သို့တက်သွားသောအခါဖိအားသည်အမြင့်နှင့်အတူလျော့နည်းသွားသည်နှင့်အမျှတိုးချဲ့လာသည်။ ၎င်းသည်အအေးကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့်ရေငွေ့များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ကာဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ငုပ်လျှိုးနေသောအပူဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရလဒ်မှာမြင့်တက်သောလေထုသည်တိမ်များနှင့်မိုးရွာသွန်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အမြဲတမ်းတိမ်တိုက်များ (ထိပ်တွင်) မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် foehn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ဆိုင်ကလုန်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လေထုလည်ပတ်မှုအလွန်ပြင်းထန်သောကြောင့်လေကိုတောင်တန်းတစ်လျှောက်အတန်ကြာဖြတ်သန်းသွားစေနိုင်သည့်အချိန်မှသာဖြစ်ပေါ်သည်။
ကမ္ဘာတဝှမ်း foehn အကျိုးသက်ရောက်မှု
မတိုင်မီဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, foehn အကျိုးသက်ရောက်မှု ကမ္ဘာပေါ်ရှိတောင်တန်းဒေသအားလုံးနီးပါးတွင်တွေ့ရှိရပြီး၎င်း၏သက်ရောက်မှုမှာဒေသဖြစ်သည်။ အဆိုပါ foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းချိုင့်၌တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ချိုင့်ဝှမ်း၌ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အကျိုးဆက်သည်လုံးဝသက်တောင့်သက်သာရှိမှုကိုပျက်ပြားစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ချိုင့်ဝှမ်း၏အောက်ခြေရှိအပူချိန်အခြေအနေများသည်များသောအားဖြင့်အလွန်ဆိုးရွားသောအခြေအနေဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့သည်တိမ်းညွတ်မှု၊ အတိမ်အနက်၊ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန် (၎င်းသည် fluvial origin သို့မဟုတ် glacial origin ၏ချိုင့်ဝှမ်းဖြစ်လျှင်) ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းအေးစက်သည့်အချက်များအပြင်တည်ငြိမ်သည့်မိုးလေ ၀ သအခြေအနေများသည်လည်းသြဇာသက်ရောက်သည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်လေထု၏ပုံမှန်အပူအပြုအမူပုံစံများကိုချိုးဖျက်သည့်အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ငါတို့ foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောနိုင်ပါတယ် ၎င်းသည်ချိုင့်များအတွင်းရှိစိုထိုင်းဆပမာဏကိုနာရီအနည်းငယ်အတွင်းပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ ကမ္ဘာမြေ၏ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမည်သို့သက်ရောက်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လေ့လာပါမည်။
Alp ၏မြောက်ဘက် Foehn အကျိုးသက်ရောက်မှု
အဆိုပါ foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုသီအိုရီကပူနွေးစိုစွတ်သောလေတိုက်မှုတ်ခြင်းနှင့်တောင်တန်းတစ်ခုနှင့်တွေ့ဆုံသောအခါ၎င်းကိုဖြတ်သန်းနိုင်ရန်အတွက်၎င်းကိုတက်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ရမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားပြောထားသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်လာသောအခါလေမှသယ်ဆောင်သောရေငွေ့သည်အေးမြ။ အေးစက်သွားပြီးတောင်တန်း၏အပေါ်ဘက်တွင်ရွာသွန်းစေသည်။ ၎င်းသည်လေထဲရှိစိုထိုင်းဆကိုလျော့နည်းစေသည်။ အနည်းငယ်သောအစိုဓာတ်နှင့်ပိုမိုပူနွေးသောမုန့်စိမ်းဖြစ်လာသည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဲလ်ပ်တောင်တန်းရှိရေငုပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြရန်ကြိုးစားသောအခါဤသီအိုရီသည်အချည်းနှီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Alpine range တွင်ဖြစ်ပေါ်သောအခါအပူချိန်တိုးလာသည်။ သို့သော်၎င်းသည်တောင်ဘက်တွင်မိုးရွာသွန်းမှုနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်မဟုတ်။ ဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ။ ဤဖြစ်ရပ်အတွက်ရှင်းပြချက်မှာအဲလ်ပ်တောင်ဘက်မြောက်ပိုင်းရှိချိုင့်ဝှမ်းများသို့ရောက်သောပူနွေးသောလေများသည်အမှန်တကယ်ပင်တောင်စောင်းများမှမဟုတ်ဘဲပိုမိုမြင့်မားသောမြင့်မားသောနေရာများမှဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်များတွင်, တက်စဉ်အတွင်း, အအေးလေထုအစုလိုက်အပြုံလိုက်အတားအဆီး၏ထိပ်သို့မရောက်နိုင်အောင်ငြိမ်တည်ငြိမ်မှုအခြေအနေရောက်ရှိသည်။ ဤပိတ်ဆို့ထားသည့်အအေးမိလေထုသည်နက်ရှိုင်းသောချိုင့်ဝှမ်းများမှတစ်ဆင့်မြောက်ဘက်သို့၎င်းင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Alps ၏မြောက်ဘက်တွင်စိုထိုင်းဆနိမ့်မှုကြောင့်ဤ foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အံ့ sk ဖွယ်ကောင်းသည့်မိုးကောင်းကင်များကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးမြင့်မားသောအပူချိန်များနှင့်အရည်ပျော်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြင့်စေသည်။ အဆိုပါ foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ 25 ဒီဂရီအထိအပူချိန်ကွဲပြားမှုများအတွက်တာဝန်ရှိနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
မြောက်အမေရိက foehn အကျိုးသက်ရောက်မှု
foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုမြောက်အမေရိကအနောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်သောအခါ၎င်းကိုခေါ်သည် ချင်းတွင်း။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါရှိကျောက်တောင်များ၏အရှေ့ဘက်လွင်ပြင်သို့မဟုတ်လွင်ပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပွားသည်။ လေနောက်သည်ဖြစ်ပျက်သောအခါလေသည်အများအားဖြင့်အနောက်ဘက်သို့ ဦး တည်သွားသည်၊ သို့သော်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဖြင့်ပြုပြင်နိုင်သည်။ မကြာခဏ Chinook သည်အရှေ့ဘက်သို့အာတိတ်အရှေ့ဘက်သို့ဆုတ်ခွာသွားပြီးပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှပြုပြင်ထားသောပင်လယ်အစုလိုက်အပြုံလိုက် ၀ င်လာသောအခါအပူချိန်သိသိသာသာမြင့်တက်လာသောအခါမျက်နှာပြင်ပေါ်မှုတ်ကျလာသည်။ အခြား foehn လိုပဲ Chinook လေ ၎င်းတို့သည်နွေး။ အခြောက်ဖြစ်သည်။
ချင်းကောက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ဆောင်းရာသီအအေးဒဏ်ကိုသက်သာစေရုံသာမကအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်သည် နာရီအနည်းငယ်အတွင်း ၃၀ စင်တီမီတာခန့်ရှိသောနှင်းများအရည်ပျော်စေရန်ဖြစ်သည်။
အင်ဒီးအတွက် Foehn အကျိုးသက်ရောက်မှု
အင်ဒီးစ် (အာဂျင်တီးနား) တွင်လေတိုက်ရာမှရေငုပ်သက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည် ၎င်းကို Zonda လေဟုခေါ်သည်။ ဤ Zonda လေသည်ခြောက်သွေ့။ ဖုန်ထူသည်။ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းမှလာပြီးပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၆ ကီလိုမီတာကျော်မြင့်သောတောင်တန်းများတက်လာပြီးနောက်ပူနွေးလာသည်။ ဒီဒေသတွေကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါ Zonda လေတိုက်နှုန်းသည်အရှိန်နှုန်း ၈၀ ကီလိုမီတာထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်။
Zonda လေအားအခြေခံအားဖြင့် Polar Fronts ၏အရှေ့မြောက်လှုပ်ရှားမှုမှထုတ်လုပ်ပြီးနောက်ချိုင့်ဝှမ်းသို့ ဦး တည်သည့်ပထဝီဝင်အရဆင်းသက်လာသည်။ ၎င်းသည်လေအားဖြူဟုခေါ်သောမြင့်မားသောအမြင့်တွင်နှင်းကျစေသည့်စက်ယန္တရားတစ်ခုနှင့်အမြန်နှုန်း ၂၀၀ ကီလိုမီတာအထိရှိသည်။ ဤလေသည်ဤခြောက်သွေ့သောဒေသအတွက်အရေးကြီးသည်။ ရေခဲမြစ်များပေါ်တွင်နှင်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အအေးမိထုသည်အနောက်မြောက်သို့ ၀ င်ပြီးမေမှနို ၀ င်ဘာလအတွင်း၌သာဖြစ်ပွားသောအခါအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အဆုံးသတ်သွားသည်။
စပိန်အတွက် Foehn အကျိုးသက်ရောက်မှု
စပိန်နိုင်ငံတွင်အဓိကလေတိုက်နှုန်းအချို့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အာဘရေဂိုသည်အနောက်တောင်ဘက်မှလာသည့်လေဖြစ်သည်။ လေ တိုက်၍ လေနှင့်တိုက်ခတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မိုး၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အအေးမိခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျသည့်ပြည်နယ်များကိုဆောင်သောကြောင့်ကုန်းပြင်မြင့်နှင့်အန်ဒလူးရှီးယားတို့တွင်လူသိများသည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှု၏အဓိကရေအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောဆောင်း ဦး ရာသီနှင့်နွေ ဦး ရာသီမုန်တိုင်းများ၏လေသည်။ ၎င်းသည်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာမှကရာရီကျွန်းစုများနှင့်အဇိုရီးစ်အကြားမှဖြစ်သည်။
အတိုကောက်အတိုကောက်ပါသောအခြားဆိုးကျိုးများမှာစိုထိုင်းဆနိမ့်မှုကြောင့်မီးများပျံ့နှံ့စေသည်။ ဤကဲ့သို့သောလေမျိုးကိုရေငွေ့သက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Cantabrian ကမ်းရိုးတန်းတွင်Ábregoသည် Viento Sur၊ Castellano (ထို့ကြောင့်တောင်ဘက်မှ Castilla မှလာသည်)၊ Campurriano (Cantabrian ဒေသမှ Campoo မှလာသည်) သို့မဟုတ်“ Aire de Arriba” (La Montañaမှ၊ အမြင့်ဆုံး) အမည်များကိုလက်ခံရရှိသည်။ ပြည်နယ်မှ) ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အလွန်ပူပြင်းလွန်းပါက၎င်းတို့အား၎င်းအားအကာအကွယ်ပေးထားသောအရာဟုရည်ညွှန်းပြီး၎င်းလေပြင်းစစ်အစိုးရလက်အောက်တွင်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောကာလသည်ရက်ပေါင်းများစွာကြာလိမ့်မည်။
Asturias အနောက်ပိုင်းတွင် regbrego သည်သစ်သီးဝလံများဟုလည်းခေါ်သည်၊ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ပြင်းထန်စွာမှုတ်သောအခါထိုအသီးများကိုကျစေသည်။
အဆိုပါ foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စိုက်ပျိုးရေး
fehn effect သည်ဆောင်းရာသီတွင် ၂၅ ဒီဂရီအထိအပူချိန်ကွာခြားမှုကိုဖြစ်စေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်ဒေသတွင်းဖြစ်သော်လည်းtheရိယာ၏စိုက်ပျိုးရေးတွင်ဖြစ်ပွားမှုမှာအတော်အတန်မြင့်သည်။ လေထုထဲတွင်စိုထိုင်းဆလျော့နည်းပြီးအပူချိန်တိုးလာခြင်းကြောင့်ပိုမိုဆိုးရွားသည့် foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်နေရာများတွင်၊ ဒီinရိယာထဲမှာစိုက်ပျိုးရေးမိုးရွာရွာစိုက်ပျိုးရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေသည်ဆည်မြောင်းထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ရေအရင်းအမြစ်များကုန်ခမ်းသွားစေနိုင်သည်။
အာဂျင်တီးနားစိုက်ပျိုးရေးကိုပိုမိုယေဘုယျအမြင်ဖြင့်ကြည့်ပါကကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုမိုးသစ်တောစိုက်ပျိုးခြင်းအဖြစ်တီထွင်ပြီး၎င်းတွင်ဇလဗေဒဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်နိမ့်သောထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဂျုံ၊ ပဲပုပ်နှင့်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းသည်အာဂျင်တီးနား၏အထင်ရှားဆုံးစိုက်ပျိုးရေးဥပမာဖြစ်သည်။
ချီလီတွင်မူ၎င်းအနေဖြင့်ဆည်မြောင်းစိုက်ပျိုးရေးကို ဦး တည်သည့်လမ်းကြောင်းပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိ foehn အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ဖြစ်ပွားမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ » အဆိုပါ foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ?
ဟိုဆေး Criado Garcia က ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်နာမည် Pepe Criado လို့ခေါ်ပါတယ်။ ၁၅ နှစ်ကျော်ကြာအောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (တောင်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်း၊ မြောက်နှင့်ကာရစ်ဘီယံ) တွေအတွက် Iberia ကဒေသဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးဌာနအကြီးအကဲအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုပြည်နှင်ခံရပါတယ်။
အဲဒီမှာ NOAA မှာသုံးနှစ်သင်တန်းတက်နိုင်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါက "Assistant Meteorology Applied Aviation to Aviation" (ဒီထက်နည်းသို့မဟုတ်ဒီထက်နည်း) နဲ့တူတယ်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်က (ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၆၈ နှစ်ရှိပြီ) ကင်ဆာရောဂါကြောင့်မသန်မစွမ်းဖြစ်ပြီးနောက်ယခုငါ Torremolinos တွင်နေထိုင်သော Malaga သို့ပြန်လာခဲ့သည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ထုတ်ဝေသည့်ဒေသခံအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောမီးသတ်ယဉ်ကျေးမှုအသင်းအဖွဲ့အတွက်။ ငါ Malaga အတွက်ရေပန်းစားခြင်းနှင့်လေတိုက်အကြောင်းကိုအထူးသဖြင့် terral ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားနေပါတယ်နှင့် foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ဤ Malaga လေ၌မွေးရာပါဖြစ်သောကြောင့်, ငါလိုအပ်သောစဉ်းစားသောဂရပ်ဖစ်များအပြင်, သင်ဓာတ်ပုံကိုထုတ်ဝေနိုင်လျှင်ငါသိလို၏ အထက်ဖော်ပြပါ Foehn အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီး၎င်းသည်ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းနီးပါးဟုဆိုရန်အတွက်သင်၌ရှိသူများ။
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့စာရေးသူနဲ့သင်ညွှန်ပြခဲ့တဲ့မှတ်စုများကိုရေးပြီး၊ ကျွန်တော်အဆင်သင့်ဖြစ်ရင်၊ မထုတ်ပြန်ခင်၊ ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကိုအီးမေးလ်နဲ့ပို့ပြီးတည်းဖြတ်တဲ့အခါမှာမိတ္တူတစ်စောင်ပို့ပေးမယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။
José Criado Garcíaကိုပြန်ပြောပါ
သူသည် "Alp ရှိ Foehn effect" ပေါ်တွင်သူတင်ခဲ့သည့်ဓာတ်ပုံသည်ထိုဒေသမှမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် La Palma ၏ Canary ကျွန်းနှင့်ပိုင်သည်။
ဂျူပီတာနှင့်၎င်း၏စူပါမုန်တိုင်း Juno သည်ယခုအပတ်အတွက်အကောင်းဆုံးပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုယူဆောင်လာသည်။